Puntland Voice – Page 975 – Codka Dalka iyo Dadka
Burcad Badeeda oo Madax furasho kla dalbaday Dowlada Masar
War ka soo baxay kooxaha burcad badeeda Soomaalida ee Haysta markab laga leeyahay Dalka Masar ayay ku dalbadeen lacag madax furasho ah oo gaareysa 4 milyan doolar. Markabka ayaa waxaa saaran badmaaxiyiin u kala dhashay dalalka masar,Pakistan India iyo siralank […]
Wasiirada Dowlada KMG oo kulan gaar ah shalay ku yeeshay Muqdisho
Muqdisho (AB):-Golaha wasiirada Dowlada KMG Soomaaliya ayaa shalay kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho iyagoo ugu horeyna warbixin ka dhageystay wasiiradii adis ababa ka soo laabtay. Wasiirka warfaafinta Dowlada C/raxmaan yariisow ayaa sheegay in wasiiradu si weyn isula faaqideen inta uga harsan xiliga […]
Jabhada ONLF oo si weyn u beenisay war ka soo baxay Dowlada Itoobiya
Mas’uuliyiin u hadlay Jabhada ONLF ee dagaalada kula jirta Dowlada Itoobiya ayaa Maanta si weyn u beeniyay war dhawaan ka soo baxay Dowlada Itoobiya kaasoo ah inay heshiis la saxiixan rabaan jabhada ONLF. Madaxa warfaafinta Jabhada ONLF Xuseen Maxamed Nuur […]
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo Dalka Yemen lagu soo dhaweeyay
Gudoomiyaha baarlamaanka Dowlada KMG Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa gaaray Dalka yemen waxaana uu durba kulamo la yeeshay mas’uuliyiin ka tirsan Dalkaasi. Wararka la helayo ayaa sheegay in Gudoomiyaha lagu soo dhaweeyay dalka yemen islamarkaana uu maalmaha soo socda […]
Maamulka Puntland oo ciidamo dheeraad ah u diray deegaanka Galgala
Garoowe (AB):-Dowlad Goboleedka Puntland ayaa maanta Ciidamo dheeraad ah oo isugu jira Daraawiish iyo PIS waxay u direen Buuraha Gobolka Bari. Ciidamada oo laga diray Magaalada Garoowe ayaa la sheegay in loogu talo galay inay xoojiyaan ciidamada Puntland ee hada ku […]
Maamulka Xarakada Alshabaab ee Magaalada Muq disho oo Maanta gubey raashin iyo dawo dhacday
Muqdisho (AB):-Maamulka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ee Gobolka banaadir ayaa maanta Muqdisho ku gubay raashin iyo dawo waqtigoodu dhamaaday. Raashinka iyo dawada ayaa ahaa kuwo intooda badan ay iskood u keeneen dad qaab ganacsi ahaan ugfu haystay goobahooda ganacsi kadib baaq […]
Milatariga Dowlada KMG oo Saaka Degmada Waaberi ka sameeyay howlgalo baqaritaano ah.
Muqdisho (AB):-Askar ka tirsan kuwa Milatariga Dowlada KMG Soomaaliya ayaa saaka Muqdisho ka sameeyay howlgalo baaritaano ah ghaar ahaan degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir. Si rasmi ah looma oga ujeedka ka danbeeya howlgalada ay saaka milatareiga Dowlada KMG ka sameeyeen […]
Miles Zinawi oo caalamka ugu baaqay inay dedejiyaan taageerada ay ugu talo galeen Dowlada KMG Soomaaliya
Miles Zinawi Ra’iisulwasaaraha dalka Itoobiya ayaa mar ku celiyay baaq uu dinida u jeediyay kaasoo ah Dowlada KMG Soomaaliya isagoo ka digay inaan taageerada si dhab loo gaarsiin Dowlada KMG. Zinawi waxaa uu dunida ugu baaqay in ku dadaalaan sidii […]
Ururka Ahlu suna oo awaamiir cusub dul dhigay meelaha ay ka taliyaan
Dhuusa-mareeb (AB):-Ururka Ahlu suna oo ka taliya degmooyin ka tirsan Gobolka Galgaduud ayaa soo saaray awaamiir cusub kaasoo la dul dhigay dadka ku dhaqan meelaha ay maamulaan. Haweenka ayaa la faray inay xijaab qaataan islamarkaana aan la arki karin haween […]
Wasiirada Koonfur Afrika oo dibu dhigay kulan ay ku ansixin lahaayeen Ciidamo Soomaaliya ay u soo diraan.
Wasiirka iskaashiga Caalamiga ah ee Dowlada Koonfur Afrika ayaa ka deyriyay inay arinta Soomaaliya lagu xalin karo milateri ahaan. Wasiirku wuxuu tilmaamay in ciidamo ay Soomaaliya u diraan ay ka wanaagsan tahay in arinta Soomaaliya loo helo xal aan ahayn […]
« Previous 1 … 973 974 975 976 977 … 1,044 Next »